Amanqaku kaNate Holmes Martech Zone |
Amanqaku ngu UNate Holmes
Njengophawu lomhlaba jikelele, awunabaphulaphuli banye kwihlabathi liphela. Abaphulaphuli bakho baquka abaphulaphuli bengingqi nabasekhaya abaninzi. Kwaye ngaphakathi komnye nomnye wabaphulaphuli kukho amabali athile aza kubanjwa kwaye axelwe. La mabali awaveli nje ngomlingo. Kufuneka kubekho inyathelo lokuzifumana, ukubamba, kunye nokwabelana ngazo. Kuthatha unxibelelwano nentsebenziswano. Xa isenzeka, sisixhobo esinamandla sokudibanisa uphawu lwakho kubaphulaphuli bakho. Ke wenza njani
NgoLwesibini, Februwari 17, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UNate Holmes
Phambi kokuba simbe kwiingcebiso ezithile zokusebenzisa iiasethi zedijithali, masizame ukukhangela kuGoogle okwethu. Masenze ukukhangela umfanekiso ngokungathandabuzekiyo kwezona ndidi zinokhuphiswano kwi-Intanethi - iinjana ezintle. Inokwenzeka njani into yokuba uGoogle abeke inqanaba elinye kwelinye? I-algorithm yazi njani ukuba yintoni entle? Nantsi into eyathethwa nguPeter Linsley, umphathi weemveliso kuGoogle, malunga nokukhangelwa kwemifanekiso kaGoogle: Umsebenzi wethu ngemifanekiso kaGoogle